Saturday, 8 Jun, 2019 10:00 AM
नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसदको क्यान्टिनमा अस्ति सोमबार दिउँसो १ः३० बजे बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिन पुगेका सांसदहरु प्रेम आले, अमनलाल मोदी, गणेश पहाडी, नरबहादुर धामीलगायत ५\_७ जना बसेर चियाको चुस्की लिइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पुगेर लेखा समितिका सदस्य अमनलाल मोदीलाई तीन खर्ब रुपैयाँ उठाइदिनुप¥यो भने । उनको आशय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजुमाथि थियो ।
जवाफमा मोदीले भने– मैले नौ अर्ब बक्यौता राज्यले पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदा कुलमानबाट त्यस्तो लाञ्छना र आरोप खेप्नुप¥यो । सही थाप्दै खतिवडाले भने, ‘म तपाईंको अस्तिको कुरामा खुशी छु । ठीक गर्नुभयो । केही व्यक्तिलाई रातारात सेलिब्रिटी बन्ने रहर जागेको हुन्छ । जे कुरामा पनि छूट खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यो ठीक भएन । म यसको पक्षमा छैन । नौ सय मेगावाट परियोजनाको कन्सेप्ट मेरै पालामा शुरु भएको हो । खै त मैले त्यसको हल्ला पिटाएको ? म राष्ट्रबैंकमा हुँदा बैकिङ सिष्टमलाई च्यानलाइज गरें, अहिले कुनै पनि बैंकमा लाइन देख्नुभएको छ ? खै त मैले यी कामबारे हल्ला गर्दै हिँडेको ?
यस्ता कामको मूल्यांकन त समाजले गर्ने हो नि ! क्याबिनेटमा पनि कतिपय मन्त्रीले त्यसो भयो भने त म बर्बाद भइहाल्छु नि भन्नुहुन्छ । तर ममा नजाऔं, हामीमा जाऔं, यो व्यक्तिको विषय होइन, जस–अपजस सबैले लिनुपर्छ ।’ पुरानो नौ महिने सरकारको प्रसंग कोट्याउँदै खतिवडाले थपे, ‘झापाली कमरेडहरु त्यो अल्पमतको सरकारमा सीपी कमरेड जानु हुँदैनथ्यो । छोटो समयमा केही गर्न सकिँदैन । त्यसले जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ भन्नुहुन्थ्यो तर अहिले त बहुमतको सरकार छ, काम गर्ने अवसर पनि छ ।’ अर्थमन्त्रीले सांसदलाई दिइएको ६ करोडमाथि सर्वोच्चमा परेको मुद्दालाई इंगित गर्दै भने, यो छ करोड नभई पूरै १५ खर्ब ३२ अर्ब बजेटमाथिकै मुद्दा हो । यो मुद्दामा अदालतले दिने आदेशले पूरै बजेट प्रभावित हुनसक्छ ।